Uhlobo C HUB - Dongguan Huachuang Electronic Co, Ltd.
Isungulwe ngo-2008, i-We Huachuang ingumakhi osezingeni eliphezulu ogxile kuphela ekwakhiweni, ocwaningweni nasekuthuthukiseni, ekwenziweni nasekuthengisweni kwe-USB-C HUB. Kusukela ngosuku lokuqala lokusungulwa, sinikeze ukubaluleka kwekhwalithi nokuphepha. Njengoba ISO 9001-Ifektri eyakhiwe ngo-2000, imikhiqizo yethu ihambisana namazinga amaningi aphathelene ne-CE, FCC, ROHS,I-REACH ne-CCC. Ngaphezu kwalokho, sihlala sinaka okukhulu emishazonke izinto ezenzelwe futhi zenziwa yithi uqobo, Iningi lazo linamalungelo obunikazi e-China, ezinye zazo zinamalungelo obunikazi eYurophu nase-US futhi.
Ngenxa yekhono eliqinile lentuthuko, amandla akhiqizwayo anele nenqubomgomo yekhwalithi eqinile, imikhiqizo yethu ithole idumela lomhlaba jikelele lomklamo omuhle kakhulu nokusebenza okuhle. Zisetshenziswa emazweni asezindaweni eziningi, njenge-USA, Finland, UAE, Canada, Singapore, Netherlands, Germany, HK, UK, France, neSpain. Sinikezela ngemikhiqizo ye-OEM ne-ODM ezinkampanini ezidumile zomhlaba wonke ezine-athome naphesheya kwezilwandle, ezifana ne-HP, Vivanco, Kobian, Phakamisa, Vertex, Macher, Strax, noGerth Gmbh.
1. Amalungelo obunikazi
Zonke izinto zenziwe yithi, iningi lazo zinama -patpatents e-China, ezinye zazo zinamalungelo obunikazi eYurophu nase-USA.
Zonke izinto zisezingeni lazo nge-CE / FCC / ROHS / REACH, iningi lazo sezizitholile lezi zitifiketi.
3. Umsebenzi omuhle
(kufana ne-Apple igobolondo, iningi labaphakeli linokuphrinta okungu-120 kodwa okwethu kungokuphrinta okungu-180) kanye nokuthile okuncane okuhle (ngokwesibonelo: onke amachweba atholakala ngokushelela).
4. Ikhwalithi Ezinzile
ukwakheka okuhle kakhulu kwesekethe okwenza ikhwalithi izinze kakhulu (iningi le-HUB emakethe lisenezinkinga ezishisayo, izindaba ezingahambelani, kanye nezinkinga zokuphazanyiswa kwe-WiFi kepha imikhiqizo yethu ixazululwa le nkinga kuze kube manje.